जताततै जग्गा दलालको बिगबिगी, बिनालगानी करोडौँ कमाउनेको सम्पत्ति छानबिन र जफत गर्ने कि ? - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
जताततै जग्गा दलालको बिगबिगी, बिनालगानी करोडौँ कमाउनेको सम्पत्ति छानबिन र जफत गर्ने कि ?
२०७७ भाद्र २६, शुक्रबार २०:३८:००
काठमाडाैँ-लामो समयदेखि अव्यावहारिक रुपमा रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले फुकुवा गरिदिएकी छन् । यसबाट आफ्नो सम्पत्ति बेचबिखन गरेर व्यावहारिक समस्या टार्न नपाएकालाई सजिलो भएको छ । बैंक र वित्तीय संस्थाको कारोबार बढ्ने भएको छ । महामारीले आर्थिक मन्दी छाएका बेला सरकारको राजस्व पनि बढ्नेछ ।
यसअघि कुनै अध्ययन र तयारी नगरी लहडका भरमा कित्ताकाट रोकिएको थियो । यसले गर्दा आफ्नै सम्पत्ति पनि बेच्न नपाएर गर्जो टार्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । अर्कोतिर स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर घूसखोरी मौलाएको थियो ।
अब मन्त्री अर्यालले जग्गा दलाललाई कानुनको दायरामा ल्याउने अर्को बोल्ड निर्णय गर्न सक्नुपर्नेछ । किनभने, फेरि घरजग्गामा बिचौलियाहरुको जगजगी हुने देखिएको छ । बाटाघाटा, घर, अफिस, रेस्टुराँ जताततै जोसुकै जग्गा दलाल बन्न सक्ने व्यवस्था पुनर्विचार गरिनुपर्छ ।
अहिले सरकारी कर्मचारीदेखि वकिल, बैंकका पदाधिकारी, पत्रकार, नेता सबैले दलाली गर्दै आएका छन् । कतिसम्म भने सांसदहरु समेत जग्गा दलाली गरिरहेका छन् । संसदीय समितिका बैठकमै कतिपय सांसदले घरजग्गा कारोबारका निजी प्रसंग उठाउने गरेका छन् ।
टाढाबाट चोर औँलाले जग्गा देखाएकै भरमा कारोबारको ५ प्रतिशत कमिसन दलालले लिने प्रवृत्ति छ । अझ त्यसमाथि तह—तहका दलालले रातारात मूल्य आकाशमा पुर्याइदिन्छन् ।
उनीहरुले आफ्नो एक पैसा लगानी गर्नु पर्दैन । बैंकको ऋण र ब्याज तिर्नुपर्दैन । कहीँ दर्ता हुनु पर्दैन । न्यूनतम योग्यता पनि नचाहिने, कर तिर्नु नपर्ने, कसैप्रति जवाफदेही बन्नु नपर्ने, आफ्नो कारोबारको विवरण कतै बुझाउनु नपर्ने । काइदाको धन्दा बनेको छ दलाली । एक हिसालबे हाम्रो राष्ट्रिय उद्यम नै जग्गा दलाली बनेको छ ।
उस्तै परे जग्गा दलालहरुले किन्ने र बेच्ने दुवै पक्षबाट कमिसन असुल्छन् । तर, भोलि कुनै कठिनाइ आइपुर्यो भने उनीहरुले कुनै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दैन । यो पेसालाई कानुनको दायरामा नल्याउने हो भने घरजग्गाको भाउ अस्वाभाविक रुपमा अझै अकासिनेछ ।
नियमित कर तिर्ने थोरै मात्र कम्पनी छन्, जसले घरजग्गा कारोबार गर्छन् । तर तिनै कम्पनीका कर्मचारीले बिनालगानी र बिनाराजस्व कम्पनीले भन्दा बढी आम्दानी गरेको पनि पाइन्छ ।
यसरी कुनै मापदण्डबिना जथाभावी चलाइएको जग्गा दलालीको धन्दालाई कहीँ न कहीँ सरकारी संयन्त्रको निगरानीभित्र नराख्ने हो भने भोलि देशमा अरु ठूलाठूला समस्या जन्मिनेछन् ।
बिनामहेनतको पैसा हातमा आउँदा त्यो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि लगानी हुँदैन । घरजग्गा बेच्नेले भाउ नपाउने, किन्नेले ठूलो अन्तरमा किन्नुपर्ने हुँदा अपराध र भ्रष्टाचार मौलाउने हुन्छ ।
यति मात्र होइन, बिचौलिया अर्थतन्त्र हावी हुँदा देशमा उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र संकुचित हुनेछ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदा औपचारिक अर्थतन्त्रले काम गर्न छाड्छ । राज्यका अरु क्षेत्रमा समेत नीति नियमले काम गर्न छाड्छ ।
त्यसैले दलालहरुलाई कहीँ न कहीँ दर्ता हुनै पर्ने, कारोबार रकम स्पष्टतः पारदर्शी तवरले सरकारी निकायमा उल्लेख गर्नैपर्ने र दलालले पनि कर तिर्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म कमाएका जग्गा दलालहरुको सूची बनाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्छ । कर नतिरेको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ ।